Sawiro: Afrika iyo todobaadkii tagay - BBC Somali
Sawiro: Afrika iyo todobaadkii tagay
Qaar ka mid ah sawirada Afrika guud ahaa iyo dhowr xabo oo aan ka soo xulanay Soomaaliga oo la qaaday todobaadkii tagay.
Image caption Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari iyo Cabdirashiid Xidig oo sheekeysanaaya ka hor intuusan dhammaan loollankii ka dhexeeyay ee ah gudoomiyaha baarlamaanka.
Image caption Xildhibaan Cabdishire Jaamac oo codkiisa ka dhiibanayay doorashadii gudoonka baarlamaanka
Image caption Mid ka mid ah dumarka xildhibaanada ah oo codkeeda dhiibaneysa
Image caption Sabtidii, Wiil yar oo isku soo xardhay taageerada uu u haayo madaxweynaha cusub ee Ghana Nana Akufo-Addo. Daankiisa ayuu ku sawiray jaceylka uu u hayo
Image caption Isla munaasabaddaas, rag durbaan ka garaacaya oo madadaalinaya madaxweynaha cusub
Image caption Kuwanna waxay yeerinayaan buun ay ugu talagaleen madaxweynaha
Image caption Dalka Ivory Coast waxaa ruxay kacdoon ay sameeyeen ciidamadan oo ku sugnaa jidadka magaalada Bouake, oo ah magaalada labaad ee ugu weyn, waxay codsanayeen in si wanaagsan loola dhaqmo.
Image caption Kacdoonkaasi wuxuu sababay ciriiri dhanka isu socodka ah. Rakaabkan waxay seexdeen wadada, waxayna sugayaan gawaari.
Image caption Xubnaha u ololeynaaya soo celiya gandheheena #BringBackOurGirls, oo Axaddii dibad bax ku qabtay Abuja. waxay maamuusayeen 1000 maalmood oo laga joogo markii la afduubtay gabdhihii Chibok.
Image caption Laakiin ololeeyayaashaas sidey rabeen wax uma dhicin oo ciidamadan ayaa dhexda uga dhacay oo kala ceyriyay
Image caption Askeri ilaalo haya xilli la Kenya lagu daahfurayay qad tareen oo cusub oo isku xiraya Nairobi iyo Mombasa. Mashruucan ayaa xarigga laga jaray Arbacadii.
Image caption Sidoo kale Arbacadii, tartanka Barketball-ka naafada ee Suudaanta Koofureed oo ka dhacay Juba.
Image caption Nin dhallinyaro ah ayaa dhagxaan ku tuuraya sladhig boolis oo ku yaalla xuduudda Tunisia iyo Libiya. wuxuu ka mid yahay dibad baxayaal ka careysay xannibaad la saaray ganacsiga isu gudubka xuduudda.
Image caption Talaadadii, Gabadha uu dhalay wasiirkii biyaha ee Burundi ee la dilay, Emmanuel Niyonkuru, waxay ka duceyneysay duugta aabeheed oo lagu qabtay Bujumbura.
Image caption Dalka Aljeeriyana, haweeney ah sarkaal sare oo booliska ka tirsan ayaa u jilba-jabsatay inay eegto gabar yar oo guri la'aan ah oo wax cuneysa. Waa sadaqo ay booliska ugu talagaleen dadka aan guryaha lahayn.
Image caption Caruur ay barakiciyeen dagaallada magaalada Kaduna ee Nigeria oo hortaagan guri ay qaxooti ku yihiin.
Sawirro: Afrika iyo sanadda 2016
31 Disembar 2016
Sawirro Sawirro: Arday Soomaali ah oo ka qeyb galay tartan hidaha iyo dhaqanka
Sawirro: Ganacsiga waratada Afrika
1 Oktoobar 2016
Sawirro Sawirro: Tartanka quruxda dadka maqaarka cas ee Kenya
Sawirro: Maalinta Doorashada 2016 ee Maraykanka